Waxaa La Soo Gabababeeyay Qaybo ka mid ah Shirwaynaha Wada-tashiga Shacabka iyo Xukuumada DDSI ee lagu Gorfaynayay Hirgalinta jihooyinka Qorshaha koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee GTP2ga. - Cakaara News
Waxaa La Soo Gabababeeyay Qaybo ka mid ah Shirwaynaha Wada-tashiga Shacabka iyo Xukuumada DDSI ee lagu Gorfaynayay Hirgalinta jihooyinka Qorshaha koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee GTP2ga.
Jigjiga(CN) Khamiis July-24-2015.Waxaa la soo gabagabeeyay qaybo ka mid ah kulan waynihii wada tashiga shacabka iyo xukuumada DDSI ee falanqaynta qorshaha koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee qorshaha isbedelka GTP2ga oo muda 4 maal mood ah ka socda xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga iyadoona ay kala hogaaminayaan Madax sarsare oo heer federal ah iyo Madaxda ugu saraysa DDSI.
Hadaba shirwaynahan lagaga arinsanayo hirgalinta wajiga labaad ee GTP2 laguna kala warqaadanayo hanaankii loo fuliyay wajigii 1aad ee GTP1 si looga gaashaanto caqabadihii jiray waayo aragnimana looga qaato ayaa Waxaa, maanta la soo gabagabeeyay fadhiyadii doodaha iyo afkaaraha ee Dhinacyada Dhalinyarada,haweenka iyo ganacsatada Deegaanka loo Qabtay.
Qaybaha sare ku xusan ee manta soo gabagaboobay ayaa ka kala socday Hoolalka Shirarka ee Qaryaan Dhoodhaan iyo hoolka shirarka ee SMCX iyadoona ay kulamadaas kala hogaaminayeen hoolka shirarka qaryaan Dhoodaan shirka qaybta ganacsatada deegaankawaxaa hogaaminayay madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka iyo warshadaha DDSI mudane cabdixakiin cigaal cumar iyo wasiir ku-xigeenka wasaarada arimaha faderaalka ato mulgeta welatu. Dhanka kale shirkii maalmahanba u socday qaybta dhalinyaradana iyo haweenka ee soo gabagaboobay manta ayaa ay hogaaminayeen wasiirku xigeenka wasaarada maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha JDFI mudane axmed shideiyo Maareeyaha Wakaalada Qurbajoogta mudane Cabdi Bari Macalin.
Shirkan ayaa waxaa layska meel dhigay meel marinta hirgalinta qorshaha isbedelka koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee GTP2 iyada oo qaybaha kala duwan ee bulshada laysla meel dhigay in ay doorkooda ka soo baxaan taasoo lagaga qaybgaliyay hirgalinta ka hor in ay fikiradooda ku aadan hirgalinta qorshaha GTP2 ay bulshadu ka dhiibato. Wariyaha shabakada wararka cakaara uga so waramayay hoolka shirarka ee SMCX oo ay ku jireen dhaliyarada DDSI ayaa sheegaya in gabagabadii kulankaasi uu wasiirku xigeenka wasaarada maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI uu ku booriyay dhalinyarada DDSI in ay doorkooda ka qaataan meel marinta hirgalinta hiigsiga qorshahani.
Dhankooda dhalinyarada DDSI oo ah cududa dihin ee deegaanka ayaa si qoto dheer u qaadaa dhigtay jihooyinka iyo doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin hirgalinta qorshahan ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin muhiimada gaar ka ah e la siiyay dhalinyarada iyo in ay ka soo dhalaali doonaan kaalinta kaga aadan qorshahan.
Dhanka kale wariyaha shabakada wararka uga soo waramaya hoolka shirarka ee qaryaan dhoodan oo lagu qorfaynaya doorka ay maalqabeenadu ku leeyihiin hirgalinta qorshahan ayaa sheegan in soo xidhitaankii kulankaasi uu madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka iyo warshadaha DDSI mudane cabdixakiin cigaal cumar uu ku booriyay hantiilayaasha ganacsatada in ay si buuxda u hirgaliyaan qorshahan ku qotoma sii wadida koboca dhaqaalaha. Dhankooda maalqabeenada ganacsatada DDSI ayaa si buuxa u balan qaadan hirgalinta qorshahan kaalintooda aadan